Ukuphupha iiHerpes Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Nabani na okhe wahlupheka ngenxa ye-herpes uya kuva ubunzima ngamadyungudyungu amabi emlonyeni nasemilebeni ubomi babo bonke. Uninzi lwabo bachaphazelekayo banolwazelelelo kangangokuba banokuziva ukuba kukho irhashalala ngaphambi kokuba ibonakale ivutha kwaye ibuhlungu kufutshane nomlomo.
Unobangela wezilonda ezibandayo yinto ebizwa ngokuba yintsholongwane ye-herpes simplex, eqikelelwa ukuba yi-90 yepesenti yabantu bonke abathwali. Nangona kunjalo, esi sifo asichaphazeli bonke abantu abosulelekileyo. I-Herpes simplex ayinyangeki, kodwa iyanyangeka ngokulula. Ukuthomalalisa ukungonwabi kunye nentlungu, ioyile kunye neekhrim zinokusetyenziswa kwindawo enesikhumba esitshayo.
Izinto ezithile zithanda ukwenziwa kwintsholongwane ye-herpes. Uxinzelelo, ukucekiseka, ilanga elininzi, okanye amajoni omzimba abuthathaka kunokubangela ukuba i-blister iqhume. Rhoqo amaxesha, kukwakho neengxaki zengqondo eziviwa sisilonda esibandayo. Ke ngoko, i-herpes inokuba nomsebenzi wolwazi obalulekileyo. Oku kuyasebenza ukuba kubonakala ngathi njengomqondiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «i-herpes» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Herpes» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Herpes» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-herpes» - ukutolikwa ngokubanzi
I-Herpes kutoliko jikelele lwamaphupha inokubonisa ukuba umntu ungena iingxaki zempilo enye ibandakanyekile. Yiyo imeko xa sifumanisa i-herpes kwabanye abantu ephupheni. Ukuba isilonda esibandayo siyatyatyamba emilebeni yomlomo wakho, kuya kufuneka ucinge malunga nokuba ujolise kakhulu kwimpumelelo kwaye ungayikhathaleli impilo yakho.
Umfanekiso wephupha «i-herpes» inokuvela ucinezelwe ngumsindo Iingoma. Ngokwenyani, kukho into evuthayo emilebeni yomlomo wakho ekufuneka uyitsho ngokungxamisekileyo. Nangona kunjalo, umntu ukhetha ukuhlala ethule kaninzi kuba engavumi ukubonisa umsindo okanye ingqumbo.
Abantu abaphupha i-herpes bahlala belawulwa kakhulu kwiimvakalelo zabo. Nokuba umsindo nengqumbo kufanelekile, umntu uhlala ezolile ngokungaphezulu, nokuba intaba-mlilo sele ibila ngaphakathi, eboniswa kutsha nje kukurhawuzelela nokutsha komlomo.
Ukuba umntu uphatha i-herpes kumava ephupha ngamafutha okanye uzama ukugubungela amablister abonakalayo, oku kubonisa, ngokutsho kwabaphandi bephupha, kwimizamo yomphuphi, into ethile ndingu Imfihlo ukubamba, okunokubangela iimpendulo ezingathandekiyo kwindalo esingqongileyo.
Uphawu lwephupha «Herpes» - ukutolikwa kwengqondo
Kwiitoliki zengqondo zamaphupha, "iherpes" kwinqanaba lephupha luphawu lwento engathethwayo. Ukucandwa kwemida. Ke ngoko, umntu ophuphayo kufuneka aqonde ukuba yeyiphi indlela yokuziphatha kwabanye abantu, nokuba yeyasemsebenzini okanye kwindawo yabucala, engathandekiyo kuye kwaye apho afuna ukubizwa ngokucacileyo.
Umfanekiso wephupha "uHerpes" uhlala ebonisa ukuba umntu ophuphayo ubona izihloko ezithile njengoxinzelelo kangangokuba bakhetha ukucinezelwa kukungazi nokususwa. Rhoqo, ngokuchanekileyo ngabo bantu baphupha i-herpes abachaphazeleka ziziphumo zentsholongwane. Apha kunokuba luncedo ukuxoxa ngokuphandle ngamanqaku engxabano kwaye uphile ngokuhambelana ngakumbi neemvakalelo zakho.
Uphawu lwephupha «Herpes» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "Herpes" ungabonisa kwinqanaba lokomoya ukuba ulusu lwakho kwaye uhlala kulo ngoku. Yinyaniso andiziva kamnandi. Ukulala kunokusebenza ngokucamngca kunye nokusebenza kwengqondo ukuze uzive uphelele kwaye usekhaya emzimbeni wakho kwakhona.